Apple inotiudza zvinoitika paminiti yega muApp Store | IPhone nhau
Apple nhasi yaburitsa chinyorwa chinonakidza muchikamu chayo "Nhasi" cheApp Store pamusoro pezvinoitika muminiti muApp Store uye nekushandisa kwayo.
Iyi data, kunze kwekunakidza, inogara ichishamisa uye tiite kuti tione kukura kweApp Store uye kukura kwakaita mamwe maapplication. Ichochiri chikonzero cheApple kuratidza idzi nhamba, kuti isu tinoona zvese zviripo uye tinoshamisika
Nhamba yekutanga inoshamisa ndeye anopfuura mamirioni XNUMX pokémon akabatwa paminiti paPokémon GO Nharaunda Yemunharaunda.
Imwe yeanonyanya kufarirwa maapplication, Tinder inorova nhamba inoshamisa yemamirioni imwe yemasiraidhi (kune ese mativi), yevashandisi vayo paminiti.
Shiri Dzinotsamwa, mumwe wemitambo yakare kwazvo paApp Store - uye inoenderera ichiva nevateveri nevatambi vakazvipira - Svitsa 28.000 shiri dzakapfura paminiti yega muAngry Shiri 2
Kuenderera mberi nemitambo, Crossy Road, iyo Frogger inodzosera, inokwanisa kuyambuka 200.000 migwagwa paminiti kuvonga kune vatambi vako.
Asi kana paine mutambo unotora zvese zvinyorwa, zviri, pasina mubvunzo, sada yeCandy Crush. Pakati pemitambo yese yakateedzana, ivo vanoparadza anopfuura makumi matanhatu mamandi macandi paminiti. Kana, isa imwe nzira, sekondi yega yega mandi mapandi anoparadzwa nemitambo yavo. Vertigo yakati wandei, yemutambo une simba risingaenzanisike rekutsiva.
Kana iwe uchida kuona mamwe maapplication ane anoshamisa manhamba, usazeze kuvhura iyo App Chitoro app uye enda kune "Nhasi" chikamu. Chii chiri chikuru skrini yeApp Store izvozvi chatinounzira, mazuva ese, maapplication matsva, mitambo mitsva uye, nguva nenguva, zvinyorwa zvakaita seiyi zvinopindura "Chii chinoitika miniti yega muApp Store?"
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Chii chinoitika miniti yega yega muApp Store?
PlayAppleMusic, inonakidza kwazvo Apple Music webhu mutambi